Tickle & Woo Atụmanya Gị! | Martech Zone
Ọtụtụ azụmaahịa azụmaahịa (B2B) usoro ahịa dị ogologo ma sie ike. Ọ bụ nguzozi nke itinye uche n’uche rue mgbe mkpebi ịzụrụ nwere ike ghara ịdagasị ha ma chụpụ ha. M na-ele ụfọdụ folks azụlite na-eduga incredibly ọma, na m etinye “Adịghị Azịza” na m ekwentị akwụkwọ zere ahịa ndị na-adịghị.
Nnyocha kwuru na ịchọta ihe atụmanya na-efu $ 443 mgbe ịga na nke onye na-agba $ 596. Gịnị mere ha ji hapụ ha? CEIR, Kpesa SM37, 2009
Tickle & Woo nwere ụzọ dị iche. Họrọ site na ọtụtụ ọdịmma onwe gị na naanị 'denye aha' na ọrụ Tickle & Woo. Ha ga-eziga a Igbe Akara na olile anya gị kwa ọnwa na ihe dị mma na ya nke ha ga-anụ ụtọ. Edere na ngwugwu ahụ bụ njirimara gị na ozi kọntaktị gị - na-enye ohere kwa ọnwa maka atụmanya ahụ iji mee ka uche gị dịrị.
Nke a bụ nnyocha nke otú ọ na-arụ ọrụ!
Nwere ike ịhọrọ nzipu ozi otu oge, ndenye aha ọnwa 6, ma ọ bụ ndenye aha ọnwa 12 - niile n’okpuru $ 100 kwa ọnwa kwa onye nnata. Ha nwekwara omenaala
Tags: ndu nurturingna-azụlite yaatụmanyammekọrịtaakọrọ ma wooakọrọ,
Nov 8, 2013 na 8:12 AM
Akara & Woo undsda dị ka “enweghị ike ibi na-enweghị nke a” akụ maka ahịa Executive. Ga-enwerịrị ndenye aha maka ndị ahịa m. Ọ ga-amasị m ịchọpụta otu ndị ọzọ si abawanye ahịa.
Nov 23, 2013 na 6:37 PM
Hụrụ ya n'anya 🙂 Ọ ga-amasị m ịhụ ọrụ Tickle & Woo na MailLift 🙂